Soomaaliya oo Safka hore kaga jirta Musuq-maasuqa Lacagaha Covid19 – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Soomaaliya oo Safka hore kaga jirta Musuq-maasuqa Lacagaha Covid19
Soomaaliya oo Safka hore kaga jirta Musuq-maasuqa Lacagaha Covid19
Hay’adda Caafimaadka Aduunka ee WHO ayaa sheegtay in Soomaaliya ay kaalinta hore kaga jirto kiisaska la xidhiidha wax isdabamarinta iyo musuqmaasuqa lacagaha loogu talo galay Xanuunka safmarka ah ee COVID-19 oo ay ugu deeqen waddamada qadhaanka bixiya.
Agaasimaha guud ee hay’adda Caafimaadka Aduunka, Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay in musuqmaasuq lagu sameeyo qalab shaqaalaha Caafimaadk ee Covid19 uu la mid yahay dil , waxanu xusay in aan la aqbali Karin heerkasta oo Musuqmaasuq ah oo Soomaaliya ay samaysay.
Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay in lacaga la cunay ee ay ogaadeen ay kor dhaaftay Milaayin doolar , waxaanu hoosta ka xariiqay in aan la qaadan Karin xatooyada ay ku kacday Soomaaliya .
Soomaaliya oo hore muddo dheer u aheyd hormuudka dalalka guul darraystay ee caalamka kuwaasi oo ay ka jiraan falal ammaan darro, qaraxyo iyo in madaxdooda lagu ilaaliyo taangiyo Ciidamo shisheeye ayaa haddana kaalinta kowaad ka gashay musuqmaasuqa lacagaha loogu talo galay Xanuunka safmarka ah ee COVID-19 taasi oo ay ugu deeqen waddamada qadhaanka bixiya .
Previous articleSomaliland oo Markii ugu Horeysa loo Diwaangelinayo 50-kun oo Dhallinyaro ah oo la Barro Xirfado kala Duwan
Next articleGuurka Iyo Caadooyinka Cajiibka Ah
Maxay tahay sababta xabsiga loogu xukumay madaxweynaha Iiraan walaalkiis?
Daawada Bararka Unugyada Maskaxda